on October 06, 2016 Related - News Feature Zarni Gyi
(တဦးခေါင်းဆောင်မှု ဦးသန်းရွှေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အံ့ချီးဘွယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးဖြစ်ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်ရေးခြင်းမှာ မသင့် သော်လည်း အခြေခံပြောင်းလဲမှုများမှာ မြန်မာနှင့်တရုတ်တို့ မိမိတို့သမိုင်းလူနေမှုကို အခြေခံရပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံအခြေ အနေကို နောက်ဆုံးတွင် ဖေါ်ပြပါမည်။
● တရုတ်နိုင်ငံ (တဦးခေါင်းဆောင်မှု မော်စီတုန်းမှ တိန့်ရှောင်ဖိန့်)
နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ရာတွင် တရုတ်ပြည်ကြီး၏ အောင်မြင်မှုမှာ အံ့ချီးဘွယ်ဖြစ်သည်။ အဓိက ခေါင်းဆောင် ကောင်းမှာ တိန်ရှောင်ဖိန် ဖြစ်သည်။ တိန်ရှောင်ဖိန့် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို အကျဉ်းချုပ်လေ့လာကြည့်ပါက... တိန်ရှောင်ဖိန့်အတွေးခေါ်များသည် ကွန်မြူနစ်စနစ်နှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ရာထူးမှဖယ်ရှားခံခဲ့ရပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ စုပေါင်းလယ်ယာတခုတွင် အလုပ်သမားအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဌကြီးမော်စီတုန်းကပြန်ခေါ်ပြီး ထိုစဉ်က နာမကျန်းဖြစ်နေသည့် ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်း နေရာဆက် ခံရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ချူအင်လိုင်း ၁၉၇၆ ကွယ်လွန်သောအခါ မော်စီတုန်း၏ဇနီးသည် လေးဦးဂိုဏ်း အလွန်အားကြီးနေချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ဟွကိုဖုန်း ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဖယ်ထုတ်ခံရပြန်သည်။ မော်စီတုန်းက ပါတီ တွင် ဆက်လက်နေရာပေးထားခဲ့သည်။
၁၉၇၆ မော်စီတုန်းကွယ်လွန်ပြီး အာဏာပြိုင်ပွဲ တလအချိန်တွင် လေးဦးဂိုဏ်း ရှုံးနိမ့်သွားပြီး၊ အနိုင်ရသူများဖက်တွင် တိန် ရှောင်ဖိန့် ရာထူးမယူခဲ့ပါ။ အကြီးကဲဖြစ်သော ဟွကိုဖုန်း ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ဥက္ကဌရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရသော်လည်း တိန် ရှောင်ဖိန့်က ဥက္ကဌရာထူးမယူပဲ ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာသည်။ အာဏာကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးမှ တရုတ် ပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
● ၁၉၇၈ - ၁၉၈၄
ပထမဆုံး လယ်ယာမြေပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြင့် လယ်သမားများ ဘုံလယ်ယာစနစ်မှ ကိုယ်ပိုင်လယ်ယာ၊ ဝင်ငွေကောင်းလာ ကြသည်။ အောင်မြင်ခဲ့သည်။ စက်မှုဇုံများကို စတင်ဖော်ဆောင်သည်။
ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရပိုင်သော စီးပွားလုပ်ငန်းများ အကြီးကျယ်ရှုံးကြသည်။ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေးတိုးတက်မှုများကို အစိုးရစီးပွားရှုံးမှုများက ဆွဲချခဲ့သည်။ အဂတိလိုက်စားမှု အရမ်းများလာပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာ အလွန်ကွာခြားလာသည်။ ပြည် သူများ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာပြီး ၁၉၈၉ တပြည်လုံး အုံကြွဆန္ဒပြသော Tiananmen Square Protest ဖြစ်လာသည်။ တိန် ရှောင်ဖိန်နှင့် အစိုးရက အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး၊ ပြည်သူလူထုထောက်ခံသူများကို အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ တွင် ရှန်ဟိုင်း စတော့အိတ်ချိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ မှစတင်ပြီး နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများစွာကို အများပိုင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများအဖြစ် အဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲပေးသည်။
အသက်ကြီးသော အစိုရလူကြီးများစွာ အနားယူခိုင်းပြီး၊ တိန်ရှောင်ဖိန့် ရွေးချယ်ထားသောခေါင်းဆောင်များကို တာဝန်ပေး ခဲ့သည်။ Jiang Zemin, Zhu Rongji တို့သည် တိန်ရှောင်ဖိန့် ကွယ်လွန်သည့် ၁၉၉၇ အထိ ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ဝန် ထမ်းများစွာ ပုဂ္ဂလိကသို့ ပြောင်းရွှေ့ရသဖြင့် မကျေနပ်မှုများစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများ ၄၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့နည်းသွားသည်။ Jiang နှင့် Zhu တို့သည် စီးပွားရေး အခွန်အကောက်များ၊ အတားဆီးပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ဥပဒေများကို များစွာ ဖြေလျော့ပေးခဲ့သည်။ ဘဏ်စနစ်ကိုလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
စစ်တပ် PLA ကိုလည်း အရပ်ဖက်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ရပ်တန်းစေပြီး၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုသာ လုပ်ဆောင်စေ ခဲ့သည်။ တိန်ရှောင်ဖိန့်ကိုယ်တိုင် စစ်ဦးစီးချုပ်ရာထူးယူထားသဖြင့် စစ်တပ်ကို ကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာကုန် သွယ်မှုအသင်း WTO သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများသည် GDP ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုး တက်လာပြီး၊ ဂျပန်ကိုကျော်ကာ ကမ္ဘာ့ဒုတိယစီးပွားရေး အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရေနံနှင့်ဘဏ် လုပ်ငန်းကို အစိုးရပိုင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
တိန့်ရှောင်ဖိန့် ခေါင်းဆောင်နေရာရောက်ပြီး နှစ် ၃၀ အကြာတွင် တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားရေး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက်ခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၁၄နှစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ လုပ်ခဲ့သည်။ ပေါ်လစီနှင့် ခေါင်းဆောင်သစ်များ ချမှတ်ပေးပြီး ၁၉၉၂ တွင် ရာထူးမှအနားယူကာ ၁၉၉၇ (၉၃ နှစ်) တွင်ကွယ်လွန်သည်။
၂၀၀၅ နောက်ပိုင်းတွင် သံမဏိ၊ ဘိလပ်မြေ၊ သင်္ဘောဆောက်ခြင်း၊ ချည်ထည်လုပ်ငန်းများမှာ ကမ္ဘာ့အများဆုံး ထုတ်လုပ် တင်ပို့သောနိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ဘက်စုံတိုးတက်လာသည်မှာ ယခုအခါ အမေရိကန်ကိုပင် ကျော်ပြီး စီးပွားရေး အင်အားအကြီးဆုံး ဖြစ်နေပါသည်။
● ဗီယက်နမ် (စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု)
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ကွန်မြူနစ်ဗီယက်နမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံကဲ့သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု စတင်ခဲ့သော်လည်း လုံးဝမအောင်မြင်ခဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း လယ်ယာမြေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းက စတင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်သည်ဟု ပြောနိုင်သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် စင်ကာ ပူနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု စက်မှုဇုံလုပ်ငန်းများဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အရှိန်ရလာသည်။
အခြေခံလူတန်းစားများကို ဦးစားပေးသောကြောင့် ဗီယက်နမ်တွင် မော်တော်ကားကို ဈေးကြီးထားပြီး၊ ယခုအချိန် ၂၀၁၆ အထိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များစွာဖြင့် သွားလာနေဆဲဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး ရာဘာ၊ လက်ဘက်၊ ကော်ဖီ၊ သီဟိုစေ့နှင့် ရေ လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးရင်းနှီးမြှုတ်နှံခြင်းဖြင့် အခြေခံလူတန်းစားများ အလုပ်အကိုင်ပေါများလာသည်။ စားသောက်ကုန် များ ဈေးသက်သာသည်။
နောက်ပိုင်း စက်မှုလုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှု များပြားလာပြီး သံမဏိ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊ စက်ကရိယာများစွာ ပြည် တွင်းထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်ပသို့တင်ပို့နိုင်လာသည်။ စက်မှုလယ်ယာ သာမက၊ အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းများစွာ တိုးတက်လာခဲ့ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ပင် လာရောက်ရင်းနှီးပြီး မြန်မာပလာဇာ ရှော့ပင်စင်တာနှင့် ကွန်ဒိုများကို ၂၀၁၅ တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီး ဖွင့်လစ်နိုင်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို မြန်မာအစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်လျှက်ရှိပြီး မြန်မာထက် များစွာသာလွန်လျှက်ရှိသည်။
● လာအို (စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု)
ကွန်မြူနစ် လာအိုနိုင်ငံသည် တရုတ်ပြည်နှင့် ဆက်ဆံရေးလျော့ချပြီး ထိုင်း၊ တောင်ကိုးရီးယားများနှင့် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဂတိလိုက်စားမှုထိန်းချုပ်နိုင်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံထက် အစစအရာရာ သာလွန်လျှက် ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုမရှိတော့ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများစွာ ရရှိသည်။ သို့သော် မြန်မာလူမျိုးများက ပိုမိုကြိုးစားကြပြီး လာအိုနိုင်ငံကို နှစ်အနည်းငယ်အတွင် ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
● စင်ကာပူ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုးရီးယားနှင့် အရှေ့ဥရောပ ချက်နိုင်ငံ
၎င်းတို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်လဲ အထူးအောင်မြင်ကြပါသည်။ သို့သော် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကွာခြားလှသဖြင့် လက် တွေ့ အတုယူဖို့မလွယ်ပါ။ အောင်မြင်သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု စံနမူနာ အဖွဲ့အစည်းခြင်း၊ လူအချင်ချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် တတ်ခြင်းမှာ အဓိကပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာဒီယားနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင် ဟွန်ဆန်လက်အောက် နှစ် ၃၀ ကျော် ရှိနေခြင်းကြောင့် နိုင်ငံတကာ ကူမ၊ ချေးငွေ များစွာရသော်လည်း အဂတိအလွန်များလွန်းလှသည်။ အတုယူစရာ မရှိဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာ အတုယူစရာမရှိသော်လည်း ထိုင်းကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ မြန်မာနိုင်ငံ အမြန်ဆုံးဝင်ရောက် ရင်းနှီးမှ၊ ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာများ ပြန်လာကြပါမည်။
● မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း (တဦးခေါင်းဆောင်မှု ဦးသန်းရွှေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
စင်ကာပူတွင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း လူတန်းစားသည် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဖြင့် နေကြသည်။ အထက်တန်းစားဟု ပြောနိုင်သည်။ ၈၀ ရာ ခိုင်နှုန်း လူတန်းစားသည် အစိုးရတိုက်ခန်းတွင် နေထိုင်ကြသည်။ သူဌေးနှင့်သာမန်လူ လူနေမှုစတိုင် ခွဲခြားမရနိုင်ပါ။ အလား တူ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ ထိုင်းနိုင်ငံများလည်း ဆင်းရဲချမ်းသာ လူနေမှုစတိုင်ကွာခြားမှု သိပ်မတွေ့ရပါ။ တရုတ်ပြည်နှင့် မြန်မာ ပြည်တွင် ဆင်းရဲချမ်းသာ သိသာစွာကွာခြားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ (ဇယားကိုကြည့်ပါ)။
နှိုင်းယှဉ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသော လာအို၊ ဗီယက်နမ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့နှင့် ယှဉ်ပြီး လေ့လာ နိုင်ပါက GDP per capital (purchasing power) အရ လာအို၊ ဗီယက်နမ်တို့နှင့် သိပ်မကွာဟု ထင်ရသော်လည်း၊ တကယ့် တဦးချင်းဝင်ငွေ GNI nominal income မှာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေါ်လာ ၁၂၈၀ ဖြင့် အတော် ကွာခြားနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ တနည်းဆိုရလျှင် ဆင်းရဲချမ်းသာ ဝင်ငွေကွာခြားမှုသည် အခြားနိုင်ငံများထက် ဆိုးဝါးနေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြောဆို နေသည့်အတိုင်း ချမ်းသာသူများ လူနည်းစုက အလွန်ချမ်းသာနေကြောင်း အချက်အလက်များက သက်သေ ပြနေပါသည်။
ဂျီဒီဘီတိုးတက်နှုန်းမှာ ၈.၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ထိတ်ဆုံးရောက်နေခြင်းမှာ ဝမ်းသာစရာဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာ လူတန်း စားကွာခြားမှု Gini Index အချက်လက်မရှိပါ။ တရုတ်နိုင်ငံ ၄၆ . ၉ ရာခိုင်နှုန်းထက် ဆိုးနိုင်ပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်းမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက ၉. ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အခြားနိုင်ငံများထက် အလွန်များပြားနေခြင်းသည် ငွေ ကြေးမတည်ငြိမ်ခြင်းကို ပြနေပါသည်။
အခွန် Tax per GDP လည်း ၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အနည်းဆုံးဖြစ်နေသည်။ တနည်းအားဖြင့် အခွန်ရှောင်ရန် လွယ်ကူသည်။ ၂၀၁၆ တွင် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တိုးတက်လာပြီဟု ကြေငြာပါသည်။
နိုင်ငံခြားကြွေးမြီမှာ Debt အလွန်နည်းပါးပြီး မကြာမီများပြားလာပါမည်။ မြန်မာနိုင်ငံ လွှတ်တော်နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ Soft Loan/ Hard Loan ဒေါ်လာ၁၀သန်း ထက်များလာလျှင် အထူးအဖွဲ့များဖြင့် စိစစ်သင့်သည်။ ၂၀၁၅ ပြည်ပကြွေးမြီ ဒေါ်လာ ၆.၆ ဘီလျှံ ရှိနေသည်။ ချေးငွေများသည် အကျိုးရှိရမည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဇီးသီဗန်းမှောက်သလို မဖြစ်ဖို့လိုသည်။
နောက်ဆုံး လုပ်သားအင်အားတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း လုပ်သားအင်အားရှိသောကြောင့် လယ်ယာပြုပြင်ရေးမှာ အလွန်အရေးကြီးပြီး၊ မလုပ်မဖြစ်သည် လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည်။ တိန်ရှောင်ဖိန့် တရုတ်ပြည်ပြောင်းလဲ ရေးလဲ လယ်ယာမြေပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လယ်သမားများကို ချောင်လည်စေပြီး လယ်သမား သားသမီးများစွာ ကျောင်း တက်နိုင်၊ မြို့ပေါ်တက်ရောက်လုပ်ကိုင်သွားကြပါသည်။
● မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလားအလာ သုံးသပ်ချက်
လက်ရှိ မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် ၂၀၁၁ မှစတင်သောကြောင့် ၅ နှစ်ကျော်မျှသာ ရှိသေးသည်။ အထူးသဖြင့် ခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အာဏာရရှိခြင်းသည် ၆ လမျှ ရှိသေးသည်။ အရာရာ အဂတိလိုက်စားမှုများ၊ စစ်တပ်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အာဏာယူထားခြင်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စသဖြင့် ပြဿနာများစွာဖြင့် စတင်ရ ပါသည်။
ပထမဦးစွာ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်ကြားစေ့စပ်မှုလုပ်ပြီး ထိပ်တိုက်မတွေ့အောင် ရှောင်ရှားရသည်။ တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်များ ရင်ကြားစေ့စပ်ဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်း စတင်နေသည်။
တရုတ်ပြည်တွင် ခေါင်းဆောင်ကောင်း တိန်ရှောင်ဖိန့် ရခဲ့သလို မြန်မာပြည်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည် ရရှိနေပါသည်။ တိန့်ရှောင်ဖိန့်သည် မော်စီတုန်းကွယ်လွန်ပြီး ၁၉၇၆ မှစတင်ကာ စစ်အုပ်စု၊ အတိုက်အခံ ၄ ဦးဂိုဏ်း တို့နှင့် နိုင်ငံရေးအာဏာ တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားရသည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှ လယ်ယာမြေပြုပြင်ခြင်းနှင့် စတင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၀ နှစ်အ ကြာ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တရုတ်ပြည်ခရိုနီလူတန်းစားကြောင့် ဆင်းရဲချမ်းသာ အလွန်ကွာခြားပြီး အထွေထွေသပိတ်ကြီးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် ခရိုနီများနှင့် အဂတိများသောအာဏာပိုင်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်လာပြီး စီးပွားရေးတဟုန် ထိုး တိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်လဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစိုးရသည် စစ်အုပ်စု၊ ကြံခိုင်ရေးအုပ်စုများနှင့် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစား နေဆဲဖြစ်သည်။ ၅နှစ်တာအတွင်း မြန်မာပြည်ခရိုနီ လူတန်းစားကြောင့် ဆင်းရဲချမ်းသာ အလွန်ကွာခြားသောကြောင့် လူထု မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ စစ်အုပ်စုနှင့်ပူပေါင်းပြီး ယခင်အစိုးရဟောင်းမှ လူတော်လူကောင်းများကို နေရာပြန်ပေးသည်။ အစိုးရအဖွဲ့၊ တပ်မတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်များ ရင်ကြားစေ့စပ်ပြီးပါက စီးပွားရေးတဟုန်ထိုး တိုးတက်လာမည်ဟု အကောင်းမြင်ပါသည်။
● အမေရိကန်၏ အရေးပါမှု
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့တွင် အမေရိကန်သမ္မတ လာရောက်လည်ပတ်ပြီး တားဆီးပိတ်ဆို့မှုများအားလုံး ဖြေလျှော့ ပေးပြီးမှ တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့ ကမ္ဘာအလယ် မျက်နှာပြန်ရပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု တဟုန်ထိုး တိုးတက်သွားသည်မှာ အ လွန်မှန်ကန်ပါသည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် တိန်ရှောင်ဖိန့်ထံသို့ အမေရိကန်သမ္မတ ရစ်ချက်နစ်ဆင် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသမိုင်း ပြောင်းလဲရသည်။ ဆင်းရဲမွဲတေသော (မြန်မာနိုင်ငံထက်ပင် မွဲတေသော) အဖြစ်မှ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံသို့ ရောက်သွားသည်မှာ မျက်မြင်ပင်ဖြစ်သည်။
အလားတူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံလည်း အမေရိကန်နှင့်စစ်တိုက်ပြီးကာစ အဆင်မပြေဖြစ်ရာမှ၊ အတိတ်အကြောင်းများကို မေ့ လျှော့ကာ အမေရိကန်သမ္မတ ဗီယက်နမ်သို့ အလည်အပတ် ရောက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်မှ အမေရိကန်အစိုးရ၏ တားဆီးပိတ်ပင်မှုများ ဖြေလျှော့ပေးခြင်းဖြင့် ဗီယက်နမ်တို့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ စီးပွားရေးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ပြီး၊ ယခု အခါ အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးနေသော နိုင်ငံဖြစ်နေလေပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံသို့လည်း အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား ၂ ကြိမ် လာရောက်ခဲ့ပြီး၊ သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်လည်း အမေရိကန် သို့ ချစ်ကြည်ရေးသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယခု ၂၀၁၆ စက်တင်ဘာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် ပိတ်ဆို့တားမြစ်ချက် အားလုံးနီးပါး ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်ဖို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည်စုံသလောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ အင်အယ်ဒီ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် နိုင်ငံသား များကို အလုပ်လုပ်ဖို့ လိုပါသည်။ စစ်တပ်နှင့် လက်နက်ကိုင်များအတွက် ထွက်ပေါက်များ ပေးရပါမည်။
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု လုံးဝမရှိသော၊ အဂတိလိုက်စားမှုကို ယဉ်ကျေးမှုအထဲထိ စိမ့်ဝင်နေသော၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ အလွန်အမင်း ကွာခြားနေသော၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် မငြိမ်းချမ်းသော၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား၊ အာမခံလုပ်ငန်း၊ ဌာနဆိုင်ရာကြိုး နီစနစ်များစွာနှင့် အလွန်ခက်ခဲလှသည်၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ မလွယ်ပါဟု လူတိုင်းပြောဆိုနေကြသည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်မှုနည်းလမ်းများ အံ့သြဘွယ် ကောင်းလောက်အောင် အောင်မြင်နေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်း အလုပ်အကိုင် အလွန်ရှားပါးနေခြင်း၊ ရန်ကုန်တွင် ကားကြပ်ခြင်း၊ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများ၊ အိမ်ခြံ မြေ ဈေးကြီးခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ရာဇဝတ်မှုများ အလွန်ထူပြောလာခြင်း၊ လက်နက်ကိုင်များ၏ တိုက်ပွဲများ .. အားလုံးသည် နိုင်ငံသားများ သစ္စာ မေတ္တာဖြင့် စိတ်ရှည်၊ ကိုယ်ချင်းစာနာခြင်းနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုများကို စနစ် တကျ ဘတ်ဂျတ်သုံးစွဲသော မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံခြားပညာရှင်များ ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီး လျှပ်စစ်၊ လမ်းတံတား၊ မြို့သစ်များ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများစွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ အခြေအနေပေးနေပါပြီ။ နိုင်ငံသားများကို နှစ်သိမ့်ပေး၊ အလုပ်လုပ်ဖို့အားပေးသော ခေါင်းဆောင်ကောင်းလည်း ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် တိန်ရှောင်ဖိန့် သူ့နိုင်ငံအတွက် အသက်စွန့်လုပ်ဆောင်ပြသလို၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း တိန်ရှောင်ဖိန့်ကဲ့သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ အခိုင်အမာ ထောက်ခံသူ၊ ကူညီပံ့ပိုးသူများစွာ ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲမွဲတေ LDC နိုင်ငံဖြစ်နေခြင်းကလဲ ကူညီရ စရာဖြစ်စေပါသည်။
စီးပွားရေး၊စစ်ရေး အနိုင်ကျင့်လေ့ရှိသော နိုင်ငံ၊ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များက သူတို့လေးစားသူတဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်ကိုတော့ အကောင်းဆုံးကူညီကြမည်မှာ သေချာလှပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလားအလာ အလွန်ကောင်းပါသည်။
မိမိတို့ လုပ်ရမည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့များ ဖေါ်ဆောင်သည့်စနစ်သစ်သို့ တာဝန်ကျေပွန်စွာ နောက် လိုက်ကောင်းလုပ်ရန်သာ ရှိပါသည်။ သူတို့သည် တယူသန်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။ ယုံပြီး ပုံအပ်လိုက်ပါတော့။ အောင်မြင်မှုသည် တရုတ်ပြည်လို ၁၀ နှစ် မစောင့်ရပါ။ ၅ နှစ်အတွင်း ထူးခြားမှုများစွာ တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသတည်း။
အောက်တိုဘာ ၂၊ ၂၀၁၆